Valala mpiandry fasana | Hevitra MPANOHARIANA
Valala mpiandry fasana
2008-07-17 @ 21:01 in Ankapobeny
Ataoko fa mazavazava avy hatrany izay tian-kambara raha izany teny izany no atsidika. Ilazana ireo olona mbola monina eny ambanivohitra, hitanao mandrakariva rehefa misy ny fotoan-dehibe na fotoana tsy azo ihodivirana. Tsy maintsy nankany ambanivohitra ny tena noho ny fodiamandrin'i Bebe ny alarobia teo.
Ny talata maraina izy no maty tany Antsirabe. Ny alarobia dia nentina avy hatrany taty "Imerina" hoy ny fitenin'itpkl dadabe izay rehefa manondro ny any Ambanivohitra izy mba hasitrika. Efa 90 taona latsaka i Dadabe no nody taona maromaro lasa izay ary 92 taona kosa i bebe izao nody izao. Olona efa voky andro avokoa.
Noho ny fihavanana mafy dia mafy teo amin'ny Ntaolo, na dia lavitra kokoa noho i Soamonina aza i Ambohitsararay Zafimbazaha Dilambato raha avy eo amin'ny tanindrazana misy anay dia niaraka tamin'Ambohitsararay izahay. Noho ny tsy fifankahazoana sady fitadiavan'ny sasany hibodo sy haka na farafaharatsiny tadiaviny hizara ny taninay kosa, nefa ny azy tsy tiany hokitiana raha tena hizara ny tany tokoa, dia lasa nisintaka tamin'io tanàna io izahay, noho ny fanapahan-kevitry dada araka ny fahalalako azy, ka any amin'ny fokontanin'i Soamonina indray no maka ny hetrantany. Tsy fantatro intsony raha mbola Zafimbazaha izahay amin'izany na tsy izy intsony. Ambohitsararay manko no atsinanana indrindra amin'ny faritry Zafimbazaha Dilambato araka ny fahalalako azy. Ny taratasy fampandrenesana anefa tsy mametraka intsony ny fokontanin'Ambohitsararay fa fokontanin'i Soamonina ho ao anaty lisitra.
Fa izany eo ihany, ny resaka Valala mpiandry fasana no tena tiako ambara. Ireo mamoha sy manidy ny fasana amin'ny fotoana tahaka itony. Na mino ny fombany ianao na tsy mino ny fombany rehefa mila azy dia arahina iny aloha. Ilay fomba na tsy ankasitrahana aza dia atao ihany noho ry zalahy. Tsy mahavita na inona na inona izy rehefa tsy misy ilay gasilahy... rehefa tsy hangady sy hamoha ilay varavarambato telo sosona ianao...ividiano izy. Alina foana eo ny andro na hanaraina akory aza fa tsy nisy zavabanona eo raha tsy misy io.
Ho sarotra anefa ny fihavanana raha toa mandingana ireo olona ireo fotsiny amin'izao ianao. Izay no mahatsara kokoa ho an'ny fiangonana tsy te-hanaraka izay fombafomba, mbola matanjaka dia matanjaka eo amin'ny Malagasy izay rehefa raharaham-paty no resahina, aleo manao fasana hafa mitokana mihitsy sady tsy maka ireo valala mpiandry fasana ireo. Adalanao raha toa ka mila ireo valala mpiandry fasana ireo ianao nefa tsy hanaiky hanome azy ny gasilahiny. Izay no mampamerina ahy mandrakariva izay kasaiko handorana ahy raha toa ka tonga koa ny andro hodiana. Tsy mila loatra ireo zavatra raiki-tapisaka amin'ny Malagasy ireo sady mandrava ihany koa ny mety hamadihana ny vovoko. Hajaiko ny azy nefa manana ny ahy koa aho.
Ilay dorana aloha tsy mampanahirana ny velona firy e! (hahihitra foana na efa maty aza ve? :-)
Fa io samy manana ny safidiny tokoa ka!
Nampidirin'i Lalasoa @ 21:16, 2008-07-17 [Valio]
mamangy amin'ny fahoriana aloha izany jentla, fa dia lalan'ny mody tokoa moa izany i nenibenao:
Momba ny tena resaka moa dia miankina amin'ny safidin'ny tsirairay tokoa, satria miankina amin'ny zava-misy izy io (ny tany honenana, ny fihavanana amin'ireo mpiray tanindrazana sy mpiray fasana, ny vola ampelantanana,...).
Nampidirin'i ikalamako @ 21:24, 2008-07-17 [Valio]
mahaiza mionona lesy dia aza misosoka alahelo intsony a
Fa misy ilana azy ihany ireny valala mpiandry fasana ireny any @ ilay fasana ntaolo be ireny. Tena tsy misokatra mintsy le izy ra tsy ry zalah no manokatra an'le izy... zavatra tsy rationel mintsy fa dia aleo tsy miditra lalina fa dia hoe c'est la vie :)
hevitra mety ny manao fasana vaovao ra misy ny ho enti-manana. Sinon, izay gasilahy in-1 isak'izay misy fahoriana aloha tsy dia hitako loatra ny hanaovana zistoira be @ ilay izy ee mais bon... samy manana ny heviny aloha ee
:) dia ampy
Nampidirin'i simp @ 22:19, 2008-07-17 [Valio]
Mamangy aloha Jentilisa a :)
Vahaolana : manao fasana atao varavarana otran'ny varavaran-trano !
Fa inona moa ilay gasilahy e ? (Lol). Misy fombafomba be angaha rehefa mamoha fasana, sa manome an'zany gasilahy fotsiny ?
Nampidirin'i pissoa @ 23:38, 2008-07-17 [Valio]
Fantatra ho azy re izany gasilahy izany e! rano ankafizin'ny gasy e
Nampidirin'i jentilisa @ 12:21, 2008-07-18 [Valio]
Aza misosoka alahelo ry Jentilisa.
Fa aleo kosa mba misy ilay gasilahy mba mamono ny mikroba indray misosoka raha vao mivoha iny ny varavaram-pasana iny e !
Nampidirin'i zem @ 13:54, 2008-07-18 [Valio]
Jentilisa : neveriko fa misy an'ilay hoe rano araradraraka amin'ny zorony sns ireny anie ilay hoe gasigasy no nahatonga ahy nanontany e lol.
Raha tsy croix bleue dia mba omeo ihany izy e :))
Nampidirin'i pissoa @ 21:20, 2008-07-21 [Valio]
Oops gasilahy fa tsy gasigasy hi hi hi